5 सर्वश्रेष्ठ साइकल युरोप मा यात्रा गर्न ट्रेल्स | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सर्वश्रेष्ठ साइकल युरोप मा यात्रा गर्न ट्रेल्स
चाहे त्यो बाहिर आंकडा केही दिन प्रयास तपाईँको बाइक गियर तर अझै पनि सुंदर साइकलको ट्रेल्स को आनंद, वा Canterbury देखि एक महाकाव्य 1,800km सवारी रोम, हाम्रो5सर्वश्रेष्ठ साइकल युरोप मा यात्रा गर्न ट्रेल्स तपाईं प्रेरित गर्नेछ!
1. हाम्रो सूचीमा पहिलो5सर्वश्रेष्ठ साइकल युरोप मा यात्रा गर्न छ ट्रेल्स: Passau, जर्मनी गर्न भियना
यो एक माथि उल्लिखित बाइक गियर भायलिन बादक लागि छैन. को अलिकति अनुभवी लागि, तर एकदम यात्रा डी फ्रान्स Cyclist, यो तपाईँका लागि हो!
एक एक हप्ता पहिले चक्र मार्ग, हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्न चाहन्छौँ रेल समातेर Passau गर्न जर्मन सीमा, सुन्दर शहर जहाँ नदी Inn, डेन्यूब, र आईएलहरू भेट्छन्. Drasch मा माथियसइट्रिच देखि बाइक भाडामा बाइक क्लिनिक र डेन्यूब छेउमा ट्राफिक-मुक्त बाटोमा बन्द पेडल.
Esterbauer गाइड प्रकाशित अंग्रेजी यो क्लासिक मार्ग लागि: नक्सा उत्कृष्ट छन् (हुनत पढाइ हुँदासम्म सवारी गर्न प्रयत्न गर्ने. कि प्रयास. छोटो कथा; यसलाई नराम्ररी समाप्त) नक्सा तपाईं दिनेछु आवास सूचीकरण लागि सुझावहरू र सँगसँगै चासो स्थानहरू, Melk र अष्ट्रीया दाखको बोट र फल बढ्दै क्षेत्रमा जस्तै. Fahrrad-Klinik एक साथ एक व्यवस्था छ होटल जहाँ तपाईं बाइक छोड्न भियना को सरहद मा. लिन्ज फिर्ता रेल पक्रने र घर उडान अघि भियना मा एक दिन या त खर्च.
2. चक्र मार्ग: मार्फत Francigena, इटाली
यस भौगोलिक चुनौती लागि, यो हुनुपर्छ आफ्नो5सबै भन्दा राम्रो साइकल ट्रेल्स युरोप मा यात्रा सूची. यो इटाली सबैभन्दा लामो साईनपोस्टेड चक्र मार्ग छ! यस मार्फत Francigena संग सिमाना मा महान् सेन्ट बर्नार्ड पास देखि चल्छ स्विट्जरल्याण्ड गर्न सेन्ट पत्रुसको Basilica रोम मा.
एक तिर्थयात्रा मार्ग भएपछि, यो एक हजार वर्ष पुरानो छ. मार्ग मार्फत सवार लिन्छ तुस्कन परिदृश्य विगतका मध्ययुगीन सहर जस्तै San Gimignano. बस आफैलाई अतिरिक्त दिन को एक जोडी दिन्छु फोटो स्टपहरू, सामयिक रक्सी टेस्टिङ, र रोम आफ्नो महान् प्रवेश रमाइलो गर्न.
रोम टिकट गर्न फ्लोरेन्स
3. डेन्यूब साइकल मार्ग
तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईंको यात्रा एक परिवार सम्बन्ध बनाउन त्यसपछि डेन्यूब साइकल मार्ग आफ्नो सबै भन्दा राम्रो शर्त छ! यो युरोप मा सबै भन्दा चिरपरिचित र राम्रो-यात्रा बाइक मार्गहरू मध्ये एक छ. यो कुनै आश्चर्य छ त्यसैले यो एक हो5सर्वश्रेष्ठ साइकल युरोप मा यात्रा गर्न ट्रेल्स.
यो डेन्यूब निम्नानुसार नदी यसको स्रोतबाट जर्मनी काला सागर गर्न सबै बाटो, तर निशान को सबैभन्दा लोकप्रिय खण्डका छ 190 माइल (306 मी) Passau र भियना को सुंदर जर्मन गाउँ बीच भाग, अस्ट्रिया. लगभग सम्पूर्ण कार-मुक्त र अपेक्षाकृत समतल, यो बाटो-जो जर्मनी र अस्ट्रिया बीच सीमाना crisscrosses को को धेरै भर कुनै पनि उमेर र क्षमता को cyclists लागि पूर्ण सवारी-छ.
4. हल्याण्ड जंक्शन नेटवर्क
मटी सूची कि रूपमा बाहिर खडा सिर्फ एक चक्र पथ धेरै गाह्रो छ हल्याण्ड मा सबै भन्दा राम्रो. वास्तबमा, हाम्रो5युरोप सूचीमा यात्रा गर्न सर्वश्रेष्ठ साइकल ट्रेल्स बस हल्याण्ड ट्रेल्स समावेश सक्छ! यो यस्तो शानदार साइकलको एउटा देश छ पूर्वाधार तपाईं एक व्यवहार लागि जहाँ तपाईं चक्र हुनुहुन्छ कि! को जंक्शन नेटवर्क निम्न साईनपोस्टेड मार्गहरू, को साथ सवारी 32,000 चक्र पथ को मी joyously बीच छोटो दूरीमा संग फ्लैट छन् उल्लेखनीय गन्तव्यहरू.
तपाईं शान्त अन्वेषण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि तट र राम्रो बन्दरगाह हल्याण्ड गरेको उत्तर समुद्र तट को गाउँमा, देशको रंगीन बल्ब उब्जनी गर्ने क्षेत्रहरू, वा एम्स्टर्डम को जीवंत राजधानी वरिपरि मार्गहरू, तपाईं आरामपूर्वक गति मा सक्रिय साइकलको बारेमा ठूलो छ कि सबै embody कि चक्र पथ पाउनुहुन्छ.
5. चक्र पेरिस गर्न मार्ग Dieppe देखि (वा लन्डन)
यसलाई केही लामो-दूरी नहुन सक्छ (मेरो लागि थियो! lol!) तर 127 Dieppe देखि पेरिस गर्न माइल सुन्दर केही दिन 'साइकलको प्रदान! सबै भन्दा प्रसिद्ध चक्र मार्ग को एवेन्यू Verte छ, तर सबै भन्दा राम्रो मार्ग द्वारा pioneered गरिएको छ डोनाल्ड Hirsch.
डोनाल्ड गरेको मार्ग
मार्ग को प्रारम्भिक माइल सानो फ्रान्सेली गाउँमा मार्फत meander, रोलिंग चढाव र गहुँ र मकै को पछिल्लो क्षेत्रहरू भन्दा. हुनत यात्रा मा रक्सी टेस्टिङ पनि चाँडै गर्न छैन प्रयास! सडक हुनत शान्त र सुरक्षित छन्, र यो रोचक तर थकित छैन राख्न बस पर्याप्त पहाड छन्. डोनाल्ड वेबसाइटमा चक्र-मैत्री आवास लिङ्क समावेश.
तपाईं पेरिस नजिकै रूपमा, को एवेन्यू Verte विपरीत, यो मार्ग ट्राफिक बच्न शाही शिकार वनको एक श्रृंखला मार्फत लिन्छ. पछि 120 गाउँको माइल, क्षेत्रहरू, र शिकार वन, तपाईं Parc सेन्ट क्लाउड प्रविष्ट. यो एक वुडल्याण्ड को बस भर्साइल्लेज पछि क्षेत्र हो, यातायात मुक्त, लामो र सीधा, र अग्लो रूखहरू द्वारा सीमा. त्यसपछि, तपाईं सडक छापिएको क्षेत्र बाहिर खोल्दछ हेर्न, फोहराहरू, र बाहिर केही.
डोनाल्ड गरेको मार्ग बायाँ तपाईं लिन्छ, त्यसैले तपाईं कहिल्यै सडक को अन्त मा के हेर्न. तर यसमा साइकल चलाउँद छानबीन लायक छ. तपाईं एक cliff आफैलाई फेला, सबै पेरिस तपाईं को सामने बाहिर फैलयो. यो तपाईं दृश्यबाट सास फेर्न नसक्ने छोड्न हुनेछ, छैन exertion.
तपाईंको पेडल प्राप्त र एक छनौट गर्न तयार5सर्वश्रेष्ठ साइकल युरोप मा यात्रा गर्न ट्रेल्स? ठूलो! यी सबै ठाउँका मद्दत संग रेल द्वारा पुग्न सकिन्छ एक ट्रेन सेव को पाठ्यक्रम! त्यसैले योजना सुरु र साइकलको सुरु!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सर्वश्रेष्ठ साइकल युरोप मा यात्रा गर्न ट्रेल्स” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-cycling-trails-europe%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल).
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml र तपाईं / डी वा / ja र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ / zh-CN.
#साइकलको #pedal Bike bikefriendly familytrip सडक यात्रा